के हुन्छ बेलाबेलामा वी’र्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ ! – Namaste Host
March 15, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on के हुन्छ बेलाबेलामा वी’र्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ !
काठमाडौं। के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने, धारा छुट्दा छरिएर जाने आदी स’मस्या छ रु अथवा, अण्डकोष सु’निने, गनाउने, नाइटोमुनि दु’ख्ने’, वी’र्य खस्दा पो’ल्नेजस्ता स’मस्याले सताउँछ र यी मध्ये कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने सोच्नुस तपाइको प्रोस्टेट ग्रन्थी ९पुरुष प्रजनन ग्रन्थी०मा स’ङ्क्रमण भएको हुन सक्छ ।
पूर्व राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलाई पनि यस्तै लक्षण देखिएपछि भारतको अस्पतालमा परीक्षण गर्दा प्रोस्टेट क्या’न्सर भएको पत्ता लागेको थियो । पछि अमेरिकामा उनको उपचार गरियो ।
उनले भने, ‘प्रोष्टेट पनि भनिने पुरुषमा प्रजनन ग्रन्थीमा समस्या आयो भने माथि भनिएजस्तो लक्षण देखिन्छ । रोग लाग्न यी सबै लक्षण देखिनै पर्छ भन्ने होइन । तीमध्ये एकभन्दा बढी लक्षण देखिए पनि प्रोस्टेटको स’मस्या हो कि भनेर सतर्क हुनुपर्छ । जसले दैनिक क्रियाकलापमा असर पार्नुका साथै मिर्गौलामा समेत असर पर्न सक्छ ।
कसैको पिसाबमा त र’गत बग्न पनि सक्छ ।’ उमेर बढी भएका व्यक्तिमा मात्र देखिने भनिएको यो रो’ग पछिल्लो समय ३० देखि ४० वर्षका युवामा पनि देखिन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
समयमै उपचार गरे सजिलै निको हुने यो रो’गलाई बेवास्ता गरे क्या’न्सर हुनसक्ने ख’तरा रहेको चिकित्सकहरू औल्याउँछन् । युरोलोजिस्ट डा दीपक रौनियारका अनुसार प्रोस्टेटसम्बन्धी रो’गमा उपचार गर्दा ठूलो स’मस्या नभए पनि स’ङ्क्रमण बढ्दै गए यसले धेरै क’ष्ट त दिन्छ नै पारिवारिक सम्बन्धमा समेत ख’टपट ल्याउँछ ।
चिकित्सकका अनुसार पछिल्लो समयमा अधिकांश पुरुषमा यो समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जकाका युरोलोजिस्ट तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन प्राडा। उत्तम शर्माले यस्तो रो’गमा खासगरी यौ’नशक्तिमा क’मी आएको महसुस हुने, पिसाब गर्न बल गर्नुपर्ने, राति पिसाब गर्न पटकपटक उठ्नुपर्ने, पिसाब लागेपछि रोक्न नसक्ने, नाइटोदेखि अ’ण्डकोषको भाग दु’ख्ने,
मलद्वारदेखि अ’ण्डकोषसम्मको भाग दु’ख्ने, पिसाब ननिख्रनेजस्तो हुने वा पिसाब लागिरहेकोजस्तो हुने तर फेर्न जाँदा नआउनेजस्ता लक्षण देखिने बताए ।
‘प्रोस्टेट ग्रन्थीको मुख्य काम वीर्य स्वस्थ राख्ने र त्यसलाई हुर्काउन मदत गर्ने हो । वी’र्य त्यतिबेला नियमित उत्पादन भइरहन्छ जतिबेला खर्च हुन्छ । जब वी’र्य खर्च हुन छाड्छ अर्थात् स्थिर रुपमा रहन्छ त्यसपछि स’मस्या देखिन थाल्छ ।
अझ सजिलो गरी बुझ्दा दुई बाल्टीमा पानी भरौँ । एउटाको पानी नियमित फेरौँ तर अर्कोमा नफेरौँ । एक महिनापछि हेर्दा दिनहुँ फेरेको बाल्टीको पानी सफा हुन्छ भने अर्कोमा भने नफेरिँदा लेउ लाग्न थाल्छ । हो त्यस्तै हो वी’र्य र प्रोस्टेट ग्रन्थीको सम्बन्ध पनि । जति वी’र्य निस्क्यो उति नै प्रोस्टेटलाई फाइदा हुन्छ,’ डा। रौनियारले भने ।चिकित्सकका अनुसार महिना या वर्षौंसम्म यौ’न स’म्पर्क नहुँदा प्रोस्टेटमा स’मस्या देखिन्छ ।
त्यसैले यसबाट बच्नका लागि नियमित यौ’न सम्पर्क गर्ने, २४ घन्टामा पाँच लिटर पानी पिउने, नियमित रुपमा पिसाबको जाँच गरी स’ङ्क्रमणबाट बच्ने र म्यो’ग्नेसियमयुक्त खानेकुरा जस्तै काजु, पेस्ता, बदाम, ओखरलगायत खाने गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ ।
नरिवलको तेलका साथ प्याजको रसलाई मिसाएर लगाउनाले कपालको विकासमा मद्दत गर्छ र कपाललाई पोषण पनि दिन्छ । प्याजको रसलाई तेलका साथ मिसाएर कपाल मसाज गर्नुहोस् । फेरि एक तौलियाले छोप्नुहोस् । यसबाट टाउकाको मृ’त कोशिकालाई हटाउन मद्दत गर्छ । जसबाट कपाल बढ्छ ।
कागती र प्याजको रसको प्रयोगले कपालको विकासमा मद्दत गर्छ । कागतीको रसले टाउकाको छाला अर्थात् स्काल्पलाई सफा गर्न मद्दत गर्नुका साथै कपाल झर्न पनि रोक्छ।
अण्डा कपालका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । लामो कपाल बनाउन चाहनेहरुका लागि प्याज र अण्डाबाट बनेको हेयरप्याक निकै लाभकारी हुन्छ । यो प्याक बनाउनका लागि प्याजको रसमा अण्डाको सेतो भाग मिसाउनुहोस् ।